AKHRISO: Kane, Wilshere & Lampard - Xiddigaha La Hubo Inaad Illowday Waqtigii & Kooxihii Ay Amaahda Ugu Ciyaareen - GOOL24.NET
AKHRISO: Kane, Wilshere & Lampard – Xiddigaha La Hubo Inaad Illowday Waqtigii & Kooxihii Ay Amaahda Ugu Ciyaareen
Ma rumaysan kartaa in John Terry oo muddo dheer soo ahaa kabtanka Chelsea iyo mid ka mid ah difaacyadii ugu wanaagsanaa horyaalka Premier League lagu bixiyey amaah oo uu muddo usoo dheelay koox kale. Ma maqashay in kabtanka Tottenham ee Harry Kane lagu bixiyey amaah oo ay Jamie Vardy isku koox noqdeen?
Kabtankii hore ee kooxda kubadda cagta Chelsea ee John Terry ayaa lix jeer u ciyaaray kooxda Nottingham Forest xill-ciyaareedkii 1999/00, kaddib markii amaah lagu siiyey, waana ka hor intii aanu noqon xiddiga lama-taabtaanka ah ee Chelsea.
Kabtankii hore ee Manchester City ee David Silva ayaa isaguna bilowgii waayihiisa ciyaareed sida Terry oo kale waxa uu soo maray xilliyo amaah ah. Eiber iyo Cleta Vigo ayaa amaah loogu diray ka hor intii aanu waayihiisa ciyaareed ka bilaabanin Valencia oo ahayd halka ay Manchester City kasoo qaadatay.
Weeraryahanka kooxda Tottenham ee Harry Kane oo lagu tiriyo mid ka mid ah weeraryahannada ugu wanaagsan dunida ayaa isaguna waqtiyo amaah kusoo qaatay naadiyada Millwall, Norwich City Leyton Orient iyo Leicester City. Kooxdan dambe intii uu joogay waxay iska garab ciyaareen Jamie Vardy.
Halkan kaga bogo 42 ciyaartoy oo ay hubaal tahay in aad illowday inay waqtiyo amaah ugu soo ciyaareen kooxahan:
Peter Crouch – IFK Hässleholm
Jonjo Shelvey – Blackpool
Michael Carrick – Birmingham City
Les Ferdinand – Besiktas
Teddy Sheringham – Djurgardens IF
Jesse Lingard – Brighton
Rodrigo – Bolton
Frank Lampard – Swansea
Danny Welbeck – Preston
Kyle Walker – Northampton
Louis Saha – Newcastle
Alan Hutton – Mallorca
Ross Barkley – Leeds
Ian Wright – Nottingham Forest
Ian Rush – Sheffield United
Mark Noble – Hull City
Wayne Bridge – Sunderland
Jordan Henderson – Coventry City
Adriano – Fiorentina
Jack Wilshere – Bolton
Giovani Dos Santos – Ipswich
Jack Grealish – Notts County
Hector Bellerin – Watford
Gylfi Sigurdsson – Crewe Alexandra
Carlos Vela – West Brom
Kasper Schmeichel – Falkirk
Giuseppe Rossi – Newcastle
Jordan Pickford – Darlington
Diego Costa – Celta Vigo
David Silva – Eibar